काँग्रेसले चार प्रदेशमा उम्मेदवारको नाम टुंगो लगायो, ककस्ले पाए टिकट ? | Rajmarga
काँग्रेसले चार प्रदेशमा उम्मेदवारको नाम टुंगो लगायो, ककस्ले पाए टिकट ?
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट चार प्रदेशका उम्मेदवारको नाम टंगो लगाएको छ ।
Previous post: बामगठबन्धन र मधेशवादी दलबीच यसकारण कुरा मिलेन
Next post: भोलि शान्तिपूर्ण रुपमा मनोनयन दर्ता गर्न आह्वान